Mr. Farmaajo oo fariin culus u diray taageerayaashiisa iyo hay’addaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Mr. Farmaajo oo fariin culus u diray taageerayaashiisa iyo hay’addaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya
Ra’iisul wasaarihii hore ee dowladdii KMG ahayd ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa fariimo culus u kala diray hay’adaha ammaanka iyo taageerayaashiisa.
Mr. Farmaajo ayaa qoraal uusoo dhigay bartiisa bulshada marka hore kaga hadlay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, isagoona sidoo kale ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay weerarkaasi.
Wuxuu Farmaajo sheegay inuu Ilaahay uga baryay intii ku dhimatay inuu Janada ka waraabiyo kuwa dhaawacmayna ay soo bogsadsaan.
“Innaa Lillaahi wa Innaa Ileyhi Raajicuun, anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha xisbiga Tayo, iyo keygaba waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii shacabka ahaa ee iyaguna weerarkaasi argagaxisada ah ku geeriyooday ” Sidaas waxaa yiri Mr. Farmaajo.
Dhinaca kale, Mr Farmaajo ayaa farriinta koowaad u diray ciidamada nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, isagoona u sheegay in saraakiisha ciidankaasi looga baahan yahay inay ka fikiraan weerarada ay Al-shabaab ka geysanayaan magaalada Muqdisho.
“Waxaa hay’addaha amniga looga baahan yahay inay marwalba ka fikiraan sugidda amniga dadka shacabka ah oo xilli kasta qaraxyadda lala beegsado, waxaa dowladda looga baahan yahay inay ka hor-tagto weerarada Al-shabaab ee ma ahan cambaareeyn kaliya ay ku ekaato, waxaa maalin kasta dhinta oo dhaawacma waa dadkeena” Ayuu yiri Mr. Farmaajo.
Ugu dambeyntii, Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo ayaa taageeryaashiisa ku war-geliyay in maalmaha soo socdo uu kusoo wajahan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoona tilmaamay inuu halkaasi ka bilaabi doonno ololihiisa doorasho ee uu isku soo sharaxaayo doorashada xilka madaxtinimadda ee Soomaaliya oo bisha November 30-keeda dhici doonta.